Voninkazo mihosom-bolo mamono menaka fanosotra Lidocaine Cream 500g mpanamboatra sy mpamatsy | FLODERMA
Krim-pamonoana menaka fanosotra, Lidocaine Cream 500g
Ny menaka manala hoditra dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fantson'ny sodium, ka ny hozatra izay manome fahatsapana ny hoditra dia tsy afaka mandefa famantarana fanaintainana. Ireo menaka ireo dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana fanatsarana tarehy, alohan'ny fandidiana kely, alohan'ny handraisana tatoazy, na fotoana hafa mety haharary ny hoditra.
Fitanana lido avo - 10,56%;
Fitaovana lido avo - 25,6%
Krema SM nurmbing vita any Korea, ary ankatoavin'ny KFDA, miaraka amin'ny 10.56% lidocaine, azo antoka ampiasaina, tsy hahatsapa ho may na tsy mahazaka ampitahaina amin'ny marika hafa na vokatra vita sinoa ny allergy. Ny tutupocaine 10.56% dia manome effets numbing mahery vaika, io no crème mamono anesthika anesthetic lohahevitra matanjaka indrindra tsy misy vokany hafa.
Ny fanatoranana lohahevitra dia misy lidocaine, izay fanafody ampiasaina hampihenana ny fanaintainana amin'ny faritra kely ao anatin'izany ny hoditra, orona ary tenda. Ny lidocaine amin'ny tsindrona dia ampiasaina amin'ny fitsaboana tachycardia ventricular ary hanatanterahana ny tsiranoka nerveuse ary ny crème numbing topical dia ampiasaina hampiasana tavy amin'ny faritra manokana. Ireo vokatra ireo dia misy toy ny gel, spray, vahaolana, menaka ary menaka manitra. Ny crème SM Numbing dia matetika ampiasaina hanamaivanana ny fanaintainana ateraky ny famorosana, ny fitevehana, ny fanaovana tombokavatsa, ny fanesorana ny tatoazy, ny fanjaitra mikraoba, ny tsindrona fanamafisana ny hoditra ary ny fitsaboana amin'ny laser.
Miezaha mampiasa ny habetsaky ny fahombiazana farany ambany arakaraka ny faharetan'ny tsirairay.
Mihatra indrindra amin'ny
1. Fandidiana isan-karazany amin'ny hoditra ambonin (latsaky ny 5mm);
2. cosmetology ara-pahasalamana (tsindrona kosmetika, fitsaboana amin'ny laser, sns.);
3. Faniriana fanjaitra (microneedle, tatoazy, fanaovana tombokavatsa amin'ny volomaso, lipotra molotra, sns.).
Fitehirizana: nasiana tombo-kase fa tsy ny vata fampangatsiahana.
Valiny: 3 taona
★ Mitroka haingana
★ Mihazona fotoana maharitra
★ Fampiharana marobe
★ Tsy misy fanentanana
★ Fandidiana tsotra
Fitandremana sy fikolokoloana:
1. Ho an'ny fampiasana ivelany ihany, tsy ho an'ny maso sy orona.
2. Sorohy ny fitehirizana amin'ny toerana misy maripana ambony na ambany ambonin'ny 40 ° C sy amin'ny toerana tratry ny hazavan'ny masoandro.
3. Ahodino ny sarony isaky ny ampiasaina ary tahirizo amin'ny hafanan'ny efitrano 1 ~ 30 ° C
Teo aloha: Akanjo fanarenana ny asidra Hyaluronic asidra kilasy fitsaboana
Manaraka: Fandidiana fitsaboana amin'ny hatsaran-tarehy Plla Poly-L-Lactic asidra tavoahangy Dermal Filler
Vidio Botox Online
Vaksinin'ny kovida sy botox
Botox mampihena ny valanoranony
Post Fikarakarana Botox
Hyaluronic Acid manamboatra hoditra manamboatra akanjo G ...
Fandidiana ara-pitsaboana hatsaran-tarehy plla poly-l-lactic acid ...
Mesotherapy Cocktail Face Mesotherapy Solution, Kofehy mampiakatra tarehy, Mesotherapy Solution Injectable, Threading fampiakarana tarehy, Cocktails azo tsindrona Mesotherapy,, Simon Cowell Botox,